Wana PMP Certification mu 2018 - Study Notes, Tips & PMP Exam Update
Wana PMP Certification mu 2018 - Project Management Certification
Tariro yekuvandudza basa rako seProjekti Management Professional inotarisira iwe kuwana ruzivo rwunotarisa pamunda uye kutsvaira moto pamusoro pepakati nekudzidza nzvimbo kuti uwane chirevo chaidiwa. Pane mukana wokuti kuwana Project Management Certification yako mu 2018 iri panzvimbo yakakwirira yepurogiramu yako yezuva, heino zine nitty inotora gander pane chikamu chezvinhu zvinenge zvichishandurwa pamusoro peongororo mugore rinotevera.
Tinofanira kungotanga nemate uye mabhoti ayo panguva ino nezvevanhu vose vanofanira kuziva
Muchidimbu pamusoro pe PMP - kubvumirwa kwayo kokutanga uye chikumbiro chakanga chiri mubhizimusi rekugadzira, apo vagadziri vakagadzirirwa kusvika kumazana akawanda uye maduku maduku vachitarisana nemativi ose eprojekti yesangano yakanzwa. Kubvira panguva iyo zvinoda kuti PMPs dzigadziridzwe uye nhasi, zvose zvedzidzo, kusanganisira iyo IT, vanovimba nevatano kuti vagoita basa kuti rizadzike. PMP Chiratidzo chinogamuchirwa ne Project Management Institute.
Bhuku - I PMI inodzinga mutungamiri weBBB kana Project Management Book of Knowledge kuti zvibatsire kuenderera mberi kuAce mahofisi mashanu emunharaunda - Kutanga, Kuronga, Kuita, Kuchengeta nekudzora nekuvhara. Pakati pezvikamu zvakasiyana-siyana zvinowira nzvimbo dzekudzidza iyo mukwidzikwi anonzwisisa dhigirii uye kutarirwa kwemazuva, mari, kugoverana kweprojekti, hurongwa, hutano, zvinhu, mabhairano, dambudziko, kuwana, uye vashandi.
Click Here download PMP Yokudzidza
The Exam - Kuongorora kunosungirirwa pamazuva ekusarudza egore paPPP yakavimbiswa, kuongorora kwePetetric kunotarisa. Tariro dzinofanirwa kuratidzira kuongororwa kwepaIndaneti dzinoidza kunzwisisa kwavo kwezvikamu zvekudzidza zve10. Chiyero chakapararira kupfuura mhinduro dze 200 iyo inofungidzira, inobatsira uye yakasikwa simba rekukwikwidza kutarisira vechokwadi semamiriro ezvinhu.
Unogonawo kutarisa: PMP Certification Training Institute muGurgaon
KUCHINJA KWEMPP CERTIFICATION EXAM MU2018
IWII nechinangwa chekuchengeta chiyeuchidzo chinoshanda uye maitiro ayo kusvika uye kuuya, PMPBOK uye muenzaniso wekuongorora ucharatidza maitiro ezvino. Pane bhudzi pamusoro pekufambira mberi, nokuti kuongorora kunosungirirwa pa 26th March, 2018 uye shure. Muchiitiko chako chauri kuongorora maererano nesangano rekare, zvakanakira kuratidzira kuongororwa kwePMP isati yasvika. Ita sezvazvingaita, kana iwe uchinge uchitadza zuva rakakodzera, heyi kamwechete-pamusoro pePPP @ Exam Updates.
PMP Eligibility - Pakave pasina kuchinjwa kwekodzero yeCP Certification yevakwikwidzi vanotarisira kubvumirwa. Izvi zvinoenderana nekurairirwa nekubatanidzwa mumunda. Pamwe panjodzi yekuti une Bachelor's degree (makore mana kana akaenzana), panguva iyoyo chiitiko chinodiwa ndeye maawa 4500 emabasa ekufambisa uye kuronga mapurojekiti. Pachinzvimbo chakanaka kuti iwe hausi kupedza kudzidza, usakanganiswa, chikoro chechikoro chechipiri kana chidimbu chekuzvipira chinotarisira iwe kuva nemaawa 7500 ekufambisa uye kuronga mapurojekiti. Zvose izvi zvinoda mirayiridzo yehutungamiri yeprojekiti yeasingapfuuri maawa 35, akachengetedzwa neHPI inocherechedza sangano.
Chikumbiro - Nzira yacho icharamba isina kuiswa mu2018. Iwe unofanirwa kuzadza fomu yekushanda paWII site. Chivimbiso chekurairirwa, uye kuwedzerwa kusangana, kunoitwa paIndaneti nesangano.
PMBOK - I PMI yakabudisa 6th kusunungurwa kwe PMBOK. Kuchinja kukuru kwebhuku uye kuongorora kuri pano:
- Kuwedzera kwechikamu nekutarisa pane chikamu chemambo wepurogiramu. Unyanzvi, maitiro, uye ruzivo zvese zvichabuda kuti zvinzwisise mibvunzo inonyanya kujeka munharaunda ino.
- Shandura muzita rezvikamu zviviri zvekudzidza
Kutarisira nguva kuchave iko kunotsanangurwa kuHurongwa hwekugadzirisa
Human Resource Management ikozvino inotaurirwa seRisource Management
Zvikamu zvina zvitsva zvakawedzerwa kune rumwe ruzivo ruzivo, zvikurukuru:
Maitiro uye kuwedzera maitiro
Kuongororwa kweAgile uye Adaptive Environment
Urongwa hwekuongorora - Nyora dzekudzidza uye mienzaniso inopfuurira sezvakaitika, pasinei nekuwedzera kwekuwedzera kune PMBOK. Iwe unogona kuita PMP iwe pachako, uye shandisa nzvimbo yePMI uye kuongorora kwepakombiyuta kuti upedzise maawa ako ekutumira 35. Iyo imwe nzira ndeyekubatanidza chirongwa chekugadzirira chichakubatsira iwe neUnited Development Units kana PDUs. Vadzidzisi vane ruzivo vachavepo kuti zvikubatsire kunzwisisa PAMBOK, maonero ematunhu ari pakati uye kunzwisisa kwakanyanya kwenharaunda dzemashoko. Zvinhu zvokuyeuka paunenge uchigadzirira kuongorora -
Tsvaka rubatsiro kana ukaongorora mumwe nomumwe uye unotarisana nenhamo nekushanda kwekushanda. PMPs mukati memasangano ako kana kuungana pamusangano anobatsira inzira inoshamisa yekuwana mhinduro dzemibvunzo.
Muchiitiko chawakabatanidzwa pane imwe nzvimbo, usasvibise kuti uite mibvunzo, kunyange iyo inoratidzika. Kubvumirwa kwePPP kunodhura nguva yako, mari uye kushanda kwegadziriro - chero kusava nechokwadi kunofanira kubviswa.
Ita nguva kubva pane nguva yako inofadza yekufungisisa PMBOK
Kunyatsoranga kurangwa kunounza zvibereko zvinokuvadza, saka shandisai kutyora miedzo, nhamba yakawanda yeunogona
Pakupedzisira, gara uine chokwadi uye uchifara apo uchipa muedzo. Kuziva kunokonzera kusvetuka
Iva nechokwadi chepfungwa nemuviri wako zvinodzorerwa musati mutevedzo uite uye pamwe unogona kutarisirwa.
The PMP Exam - Nguva yegumi nemashanu inopiwa kuti uongorore pepa racho, uye shure kwaizvozvo iwe uchawana maawa mana kuti upedzise mibvunzo ye200. Vakawanda vanotarisira vanogona kuongorora pepa mumaminitsi mashanu uye kushandisa mamwe ose emaminitsi e10 kunyora manotsi pamapepa akapiwa kubatsira kubatsira. Izvo zvingaita, kuenderera mberi mberi uku kudzidziswa kuchabviswa. Ita sezvazvingaita, kumhanyira kunyorera manotsi kana 'kurasa pfungwa' sezvazvakadanwa zvinobvumirwa pakati pemamwe maawa mana. Sezvo PMP isingatauri maitiro asina kunaka echipinduko chisina kururama, unoda kusanetseka pane zvakaitika apo iwe unowana sarudzo kubva-msingi.
The Result - Vaya vanotora mapeji-based test vachawana migumisiro yavo mumazuva mana apo mutsara wekutsvaga muIndaneti unotumidzwa mumutsara wechipiri. Iwe uchawana imwe yezvikamu zvitatu:
Kutarisana noupenyu hwezuva nezuva shure kwe PMP certification - Unogona kuwana mikova yakaoma yakawanda kana chiziviso chikawanikwa pamwe chete nekufambira mberi kwebasa uye zvikwereti zviri nani zvekubhadhara. Sezvo mukuru achifambisa purojekiti, haungangowedzera kukosha kweshamwari yako nehuwandu hwemashoko ako akavandudzwa, iwe uchange wakagadzirira kutarisa matanho uye zvinhu.
PMP Re-Certification - Kana wapedza kuwana PMP certification, nguva dzose iwe unofanira kuwana 60 PDUs, kuti uwanezve chikwata.
Pakupedzisira, pasinei nokuti iwe unosarudza pakuongorora here ikozvino kana mushure mokunge 26th March, 2018, pane chinhu chimwe chete chaunofanira kuva chakajeka che Project Management Certification hachisi chinhu chakaoma kuita, chero bedzi iwe uchisimudza pfuti yekudzidza nekuita .